Wasiiro Somaliland oo iscasilay - BBC News Somali
Wasiiro Somaliland oo iscasilay
26 Oktoobar 2015
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland, Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wasiirka Arimaha Dibedda Maxamed Biixi Yoonis, ayaa goor dhoweyd kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa inay iska casileen rasmi ahaan xilalkii wasiirnimo ay ka hayeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Labada wasiir oo weriyaha BBC ee Hargeysa, Axmed Saciid Cige, telifoonka kula soo xidhiidhay goor dhoweyd, faahfaahin ma ay bixin. Hase-yeeshee wasiirka wasaaradda arimaha dibedda Maxamed Biixi Yoonis, kana mid ah murashaxiinta u tartamayay jagada madaxweynaha ee xisbiga Kulmiye dhexdiisa, wuxuu BBC u sheegay in madaxweyne Axmed Siilaanyo oo hore u ballanqaaday inuu dhex u noqonayo marashaxiinta xisbiga Kulmiye uu hadda u muuqdo inuu garabka saaray hal murashax.
Waxaa iyaguna ku dhawaqay is casilaadooda wasiirka shaqada iyo arimaha bulshada Dr. Cabdi Aw Daahir iyo wasirka cadaaladda Xuseen Axmed Caydiid.
Xubno kale oo golaha wasiirada, ayaa iyana wararku sheegayaan laakiin weli BBC ma xaqiijin.
Xisbiga Kulmiye, ayaa 10ka November ee sanadkan ku qabsanaya magaalada Hargeysa shir golaha dhexe, uu xisbigu ku kala dooranayo murashaxiinta u taagan jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee doorashada la filaayo March 2017.